China Yakagadziriswa Crystal pear bhatani Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Quotation - MIMO KUyerera KUDZORA
Imba > Bhatani > Pearl bhatani > Crystal peya bhatani
1. Nhanganyaya yeCrystal peya bhatani:
2. Chigadzirwa parameter yeCrystal peya bhatani:
Crystal Pearl Mabhatani neBuchi Kucheka kweNguo
Crystal, ABS mapurasitiki, girazi kana ganda
500pcs / saizi / ruvara
Zvakafanana nemufananidzo, uye inogona kuraira rakasarudzika ruvara
Mabhegi / Yekupfeka Yemuchato / Clothing / Knit Sweater / PartyDress
Gamuchira tsika magadzirirwo uye echako tsika
Bhegi reOPP kana zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi
3. Zvakanakira kristaro parera bhatani
Hwakanaka hunyanzvi, hwepamusoro-magumo mhepo, hwakaomarara basa.
4. Mirayiridzo yekushandisa chigadzirwa cheCrystal peya bhatani:
Iko kristaro parera musanganiswa bhatani ndiyo yekutanga yeakakwira-magumo nguo dzakasimba
Bhatani repamusoro-giredhi rinonyanya kuratidzwa mune zvaro rakakwira-giredhi, modhi yakanaka, ruvara runako, kusimba kwakanaka, izvi zvinhu zvakakosha mamiriro ekristaro pearl bhatani rekubatanidza bhatani.
1. Maitiro ekugadzira dhizaini dhizaini?
Ndokumbira utumirewo email zvigadzirwa zvako mune chero mhando dzemafomati sengeJpg, AI, CDR, PDF nezvimwewo uye ita chirevo chakajeka che dhizaini iwe yaunoda, thesize, ruvara, uye huwandu. Tinogona kuita emahara masampula ekutendera kwako.
Kana iyo mvumo ichibvumidzwa, ndapota titumire yako PO kuburikidzaemail. Ipapo isu tinokutumira iwe Invoice kuti usimbise mirairo.
3. Ndeapi marudzi ekubhadhara anogona kugamuchirwa?
Tichatanga kuburitsa kana iko kuzere kubhadhara kwagadzirwa. PayPal, TT uye West Union zvinogamuchirwa.
4. Yakareba sei & ndeipi inoratidza?
Yedu yekutungamira nguva ingangoita mazuva 5-7 mushure mekugamuchira iyo yakazara kubhadhara Asi kuraira kwakawanda kunogona kutora chinguva chakareba. Zvigadzirwa zvinotumirwa neDoor-to-Door Express (UPS, DHL, EMS, FedEx, uye TNT) ..
5. Ungawana rini mutengo?
Isu tinowanzo taura mukati memaawa makumi maviri nemana mushure mekuwana kubvunza kwako. Kana iwe uchikurumidza zvikuru kuti utore mutengo, ndapota tifonere isu kana utiudze inyour e-mail kuitira kuti isu tigo tarisa yako yekutanga kubvunza.
Bhatani reABS pear